ဆိုးသွမ်း: မီးတော့.....မီးပဲ ဒါပေမယ့်
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:01 AM
အင်းဘဝတွေက ခါးနေကြတာပါလားနော်။ ဘဝခါးခါးကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ဘယ်လိုအင်အားယူပြီး၊ ဘယ်လိုကြိုးစားကာ၊ ဘယ်သူ့ကို များစောင့်မျှော်ရပါ့မလဲ??????????????
ဒီလိုပါပဲ အစ်ကိုရာ အဝေးေ၇ာက်သားတွေအတွက် ဒါမျိုးအဖြစ်တွေက မဆန်းပါဘူး အစ်မပြောသွားသလို ငတ်တော့မငတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့စကားမျိုး ကျနော့်အစ်မတွေလည်းပြောဖူးသား ဒီမှာ ကော်ဖီပူပူလေးနဲ့မုန့်တစ်ခုစားနေရပေမယ့် ဟိုမှာတော့ ထမင်းကြမ်းအေးအေးကို ငါးခြောက်ဖုတ်လေးနဲ့.........................။
ဖတ်မိတော့ သက်ပြင်းတစ်ခုကို ဟူးကနဲ မှုတ်ထုတ်လိုက်ချင်တယ် ...
ဒါပေမယ့် အောင့်ထားလိုက်တယ် ...
ဖယောင်တိုင်မီးလေးငြိမ်းသွားမှာ စိုးမိလို့ ...
အော် ... ဒါနဲ့
အခါးတွေက ... ဆေးဖက်ပိုဝင်သတဲ့ ... ။
ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်.။။ တကယ်ပါ. စိတ်မကောင်းဘူး
ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီလိုပါဘဲ ..တစ်နေ့ကြအောင်မြင်ရမှာပေါ့ဗျာ..
အင်း .... တော်တော်များများသောဘ၀တွေ ခါးနေကြတာ ကြားရပါတယ် .... မြင်လဲမြင်ဖူးပါတယ် ... ကိုယ်တတ်နိုင်တာဘာရှိမလဲ စဉ်းစားပြီး တတ်နိုင်သလောက်တော့ လုပ်ကြည့်နေတာပါပဲ ....
ရသ အစုံအလင်နဲ့ ခံစားမှုမျိုးစုံကိုပေးသွားတဲ့ပို့စ်လေးလို့လဲမြင်ပါတယ်
အစ်မကြီးအမိအရာ ဆိုတဲ့အတိုင်းမောင်ငယ်ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးနေပုံနဲ့ မိဘမေတ္တာတွေကိုခံစားရလိုက်သလို ။
ကိုယ့်နိုင်ငံက ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ဘ၀ခါးခါးကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ၊
ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်တော့ပါဘူး (ပြောလဲ မောတာဘဲ အဖတ်တင်တာကိုး)ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လက်လှမ်းမှီသလောက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာဘဲတွေးနေမိပါတယ်
မှာ မိသားစုရဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ နားလည်မှု့တွေ အပြည့်ပါဝင် နေပါစေ
i lost my words. !_!